Umkhiqizi We-inflatables ohamba phambili we-2020, Fekthri Yokwethenjiswa Kwama-inflatables | Inamandla
Singabakhiqizi abasebenza kahle kakhulu abathengisa ama-airbags angaphezu kwe-10000.
SIYAKWAMUKELA TOYS TOYS TOYS TOYS
Amathoyizi Anamandla umlingani wakho omuhle kakhulu noma ngabe ulindele ukubuyisela umgodi wakho wegwebu epaki lakho le-trampoline noma esikhungweni sokuzivocavoca ngama-airbags, noma ufuna ama-airbags amakhulu e-freestyle ukuze afinyelele emangalisa ukuqopha.
Amathoyizi Anamandla umlingani wakho ohamba phambili noma ngabe ufuna ukungena esikhundleni somgodi wakho we-foam epaki yakho noma endaweni yokuzivocavoca ngesikhwama somoya, noma uhlose ukwenza imicibisholo ehlukanisa irekhodi ungene esikhwameni esikhulu se-freestyle airbag. Ngabe ufuna ukuthola injabulo ethe xaxa esifundweni sakho sezintambo eziphezulu, noma uneplatifomu ekhona noma isikhala esengeziwe? Ufuna indawo entsha sha ongayengeza epaki yakho ye-adventure ukukusiza ukudala imali engenayo futhi uguqule iphothifoliyo yakho yemisebenzi? I-Stunt Airbag ukukhetha okuhle!
I-Custom inflatable jumping bouncer yamathoyizi Amandla kaKhisimusi
I-2020 yokuphuma phambili ye-airbag efektri ihamba kahle ngokunqamula okungagxili okwenziwe ngoKhisimusi ngentengo yokuncintisana, xhumana nefektri enamandla.
I-Airbag Ye-inflatable Airbag Blow-up Airbag ephephile eyi-BMX
Ifektri enamandla inikezela ngamakhasimende womhlaba wonke angokwezifiso ama-airbag, aqhumise i-airbag ukuze afinyelele ngokuphephile, xhumana nathi futhi uthole umklamo wamahhala we-3d manje.
Isikhwama Somoya Onamandla, i-Best Landing Airbag
Ufuna i-airbag yangokwezifiso? Xhumana namathoyizi Anamandla wokuthola i-airbag yakho yangaphansi eyodwa ngentengo yokuncintisana, gcina izindleko zakho manje.
Inamandla i-Airbag Bmx, i-Universal Airbag Production
I-20m airbag bmx eyaziwa kakhulu nge-2020, isikhwama somoya esisebenza emafemini Amandla amathoyizi amancane, intengo ehamba phambili efektri, thola imininingwane.
Singomunye wabakhiqizi bokuqala bama-airbags ane-R efanelekile& Amaqembu e-D.
Sinamathisela ukubaluleka okukhulu ekuthuthukisweni nasekuhlolweni komkhiqizo. Ukuthuthuka ngokuphepha kungukuphishekela kwethu. Amathoyizi Anamandla athengise ama-airbags angaphezu kwe-10000 kuze kube manje. Sihlala sinikela ngemikhiqizo emihle kakhulu kanye nensiza efanelekayo yamakhasimende emhlabeni jikelele.
Ngenxa yokwakhiwa kwayo okuqinile futhi okulula, i-BMX Airbag iye yaba yisitolo somoya esidume kakhulu ezindaweni zokuphumula ski, emapaki e-skate naseziqiwini zamabhayisekili. The Air Track for ukuqeqeshwa! Le-Air Track isebenza kahle kuwo wonke umzimba wokuzivocavoca nokudlula okuwela phansi. Ukusuka emidlalweni yokuzivocavoca kuya epakiour, kusuka ekilasini le-kung-fu kuya ku-physiotherapy, kuyisisekelo esihle sezindlela ezahlukahlukene zemidlalo nezindlela zokuziqeqesha.
Umkhiqizo wethu usezingeni eliphezulu kakhulu. Sinikeza ngamanani ancintisanayo kakhulu futhi anengqondo. Sigijimisa imigqa yokukhiqiza ephezulu kakhulu. Sikholelwa njalo ukuthi ikhwalithi ye-premium, insiza enhle kakhulu, kanye nentengo yokuncintisana kuyindlela kuphela yokuhlola imakethe enkulu. Sinaka imininingwane mayelana nokuklama, ukukhiqiza, ukucubungula ama-oda, nokuthumela.
Singumkhiqizi ohola phambili wezwebe zomoya.
Amathoyizi Anamandla Co, Ltd ngumkhiqizi wama-inflatables. Sihlome kahle ngamadivayisi wokuhlola namandla obuchwepheshe obuqinile. Njengomunye wabakhiqizi abahamba phambili abasebenza ngokweqile eChina, sithole idumela lekhwalithi nesevisi emakethe yomhlaba wonke, ikakhulukazi eYurophu, e-USA, e-Australia naseMiddle East.
Amaphaneli wethu wephothifoliyo e-Jump Airbag, i-Bumper Ball, I-inflatable Tente, Inkundla Yebhola, Amabhomu, Amageyimu We-inflatable Ground, Slide, Combo, Izithiyo, Imidlalo Yezemidlalo, Imidlalo Yamanzi, Imigudu, I-Modlatable Model, I-Arch, I-Cartoon kaKhisimusi, I-PVC Balloon, i-Air Dancer, i-Roller Ibhola nemikhiqizo enjengezi inflatable.
Vele ushiye i-imeyili noma inombolo yakho yocingo kwifomu lokuxhumana ukuze sikuthumele isilinganiselo samahhala semikhakha yethu ehlukahlukene!